सुजिताको पोष्टमार्टम रिपोर्ट यस्तो आयो , अब भिसेरा परिक्षणवाट के आउला प्रमाण ? – Kavrepati
Home / समाचार / सुजिताको पोष्टमार्टम रिपोर्ट यस्तो आयो , अब भिसेरा परिक्षणवाट के आउला प्रमाण ?
admin July 7, 2021	समाचार Leaveacomment 309 Views
पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकले रिपोर्टमा उनको घटनाको कारण यहि नै हो भन्ने प्रमाण दिने खालको कुनै संकेत नदेखिएको जनाएका छन् । उनको शरिरको भित्र र वाहिर कुनै चोट देखिएको छैन । पाठेघर खाली छ भने योनीमा पनि कुनै घाउ छैन । त्यसैले जवरजस्तीको कुनै संकेत पनि देखिएको छैन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोपाल चौधरीका अनुसार अब उनको घटनाको यथार्थ थाहा पाउन भिसेरा परिक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आफुहरुले नमुना दिएको र प्रहरीले त्यसको परिक्षण गर्ने उनको भनाई छ । चितवनकी सविता भण्डारी हराएको ९ दिन पछि मृत फेला परेकी थिइन् । उनको घटनाको यथार्थ छानविन माग गर्दै स्थानिय र आफन्तले आन्दोलन जारी राखेका छन् । अवस्था विग्रन नदिन उनको घर आसपासको क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । कर्फ्यु बुधवार साँझ सम्मका लागि लगाइएको छ ।
Previous गित गाएरै ३ करोडको घर आधा करोडको गाडीको मालिक
Next रहेनन् भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार, यसरि भयो दुखद निधन